musha > Travel Europe > 10 Most Beautiful Gardens In Europe
Europe ndiyo yakanaka kwazvo muchirimo. Zvikomo nemigwagwa zvinotumbuka nemavara anoyevedza, kushandura kona yega yega kuve yakanaka mhenyu mhenyu. Kubva kuFrance magadheni kuenda kumasango echirungu mapindu uye dzimba dzevitaly dzimba, kune mamwe magadheni muEurope kupfuura mune chero imwe nzvimbo yepasi. Kana iwe uri kuronga chitubu kana zororo rezhizha muEurope saka unofanira kungoshanyira chimwe cheizvi 10 mapindu akanaka kwazvo muEurope.
1. Versailles, Furanzi
Matsime emvura, nyika yakasvibirira yakasvibira, gadzira mapindu eVersailles kumusoro kwedu 10 mapindu akanaka kwazvo muEurope.
800 mahekita epasi anoumba bindu reVersailles. Nzira dzino tenderera, 35 km yemakorani emvura uye zvifananidzo, kufadza vafambi vanobva kutenderera pasirese. Hapana mubvunzo, Versailles yakanaka rwendo rwezuva - kubva kuParis, uye kana uchinge wasvika unozofuridzirwa nekunaka kwaro.
Maitiro Ekuenda KuVersailles Gardens?
Iyo minda iri mutaundi reVersailles, inenge awa nechitima kubva kuParis.
Kupfuurisa 7 mamirioni echiDutch tulips anotambira vashanyi gore rega rega mune yakaisvonaka Keukenhof Gardens. Bindu remaruva rakakura kwazvo pasirese rinovhura magedhi aro muna Kubvumbi naMay. Iwo tulips’ Kutumbuka ndechimwe chezviitiko zvikuru muNetherlands.
Ndekupi Keukenhof Gardens?
Iwo mapindu ari muLisse, mumoyo weBollenstreek. Ingori hafu yeawa nechitima kubva kuAmsterdam.
3. Villa D'este Mapindu, Roma Italy
Muenzaniso unoshamisa weRenaissance muItari, Ville d'Este mapindu muTivoli anonakidza. Iri gadheni rakanaka nderimwe re UNESCO masosi epasi rose eEurope.
Vhura gore rese-kutenderera, bindu re 1000 matsime akarurama 30 km kubva kuRoma. Chimwe chezvinhu zvinokatyamadza zvauchacherekedza nezvazvo iro dhizaini dhizaini dhizaini, uye matsime emvura pamwe ne hydraulic mumhanzi.
Ungasvika Sei Villa D'este Bindu MuTivoli?
Tivoli inosvikika zviri nyore nechitima kubva kuRome uyezve bhazi rinofamba kubva kuchiteshi chechitima.
4. Isola Bella Bindu, Itari
Isola Bella minda iri pakati peLake Maggiore. Zvitsuwa zveBorromean muNorth Italy, iyi mienzaniso inoyevedza yeBaroque dhizaini yamambo uye mapindu eItaly.
Kutenda kune yakapfava mamiriro ekunze muBorromean Gulf, iwe unowana akawanda asingawanzo uye ekunze maruva mune Isola Bella magadheni. Pamusoro pe, madziva, zvitubu, uye kunyangwe machena mapikoko anozopedzisa iyo inoshamisa marongero emapikicha ako ekufamba.
Ungasvika Sei Isola Bella Gardens Kubva kuMilan?
Isola Bella mapindu ari yakanaka zuva-rwendo kubva kuMilan. Unogona kufamba uchibva pakati peMilan mukati meawa nechitima uye a chikepe tasva kubva kuna Stresa.
5. Petrin Chikomo, Prague
Petrin Chikomo inzvimbo yakanaka yekudzoka kubva kumapoka evashanyi. Girini yakasvibira, miti, uye nzira dzino tenderera dzinoenda newe kumafaro anotyisa emabhiriji nemuzinda wePrague. Nezve izvo zvisingakanganwiki maonero eguta, iwe unofanirwa kunanga kuPetrin Hill shongwe iri kumusoro kwenzira muminda.
Petrin Hill minda ndeimwe yeminda yakanaka kwazvo muEurope. Iwe unogona kushandisa nyore nyore masikati akasununguka kana mangwanani ane usimbe uchinakidzwa nemaonero.
Nzira yekusvika sei kuPetrin Hill Gardens?
Inowanikwa pakati pePrague, iwe unogona kufamba kana kutora metro kuenda kumapindu kubva chero kona iri muguta.
6. Marqueyssac Gardens, Furanzi
Iwo mapindu akasarudzika muEurope anonyatso simisa magadheni eMarqueyssac muFrance. Kumira pamusoro pemupata weDordogne inyanzvi hakuna mumwe kunze kwaAndre le Notre, kuronga kweVersailles magadheni.
Iyo yakasarudzika yemagadheni iri mune topiary art ye 150,000 ruoko-rwakachekwa boxwoods iri mune network yemakwara senge maze. The gardens surround 17th-century chateaux and overlook the Dordogne valley. Zve kushanya kwemashiripiti zvechokwadi, ronga rwendo rwako neChina manheru, apo gadheni rakavhenekerwa nemwenje.
Maitiro Ekuenda Kune Marqueyssac Gardens?
Iyo minda iri pakati pe kumatunhu waini muFrance. Marqueyssac minda ndeye 2 maawa ’ chitima tasva kubva kuBordeaux.
7. Ludwigsburg Palace, Jerimani
Inozivikanwa seBluhenden Barock muchiGerman, zvichireva Baroque mukutumbuka, Ludwigsburg Palace Bindu rakanaka. Zvakafanana neVersailles magadheni anoshongedza nzvimbo dzamambo, iri gadheni reGerman rinotumbuka wega wega chitubu mumaruva, zvinomera zvakasvibirira, and even a Japanese inspired garden with Bonsai trees.
Iyo yakaenzana Baroque gadheni rakagadzirwa nenzira yeFrance yekuzadzisa imba yamambo.
Maitiro Ekuenda KuLudwigsburg Palace Bindu?
Iyo gadheni iri kunze kweStuttgart, uye iri 30 maminetsi 'kukwira zvifambiso.
8. Mainau Island Gardens, Jerimani
Runako muMainau maruva chitsuwa ndechekuti panogara paine chimwe chinhu chiri kutumbuka. Iri bindu rinoshamisa riri muLake Constance. Iyo semi-tropical mamiriro ekunze akakodzera kune ese ari maviri anodziya maruva uye yeChirungu akamuka gadheni.
Iyo gadheni rakagadzirwa mu 19fung zana nemuchinda Nikolaus von Esterhazy. Nhasi izvi 45 hectares ’gadheni rinogamuchira mamirioni evashanyi gore rese kutenderera yeorchid show iyo inovhura mwaka wematsutso.
Nzira Yokusvika KwaMainau Bindu?
Unogona kufamba nebhazi kubva Konstanz chiteshi chechitima, ngarava dzemotokari kubva kumisha yakapoteredza, kana nemotokari.
9. Sigurta Bindu Verona, Itari
Paki Sigurta Bindu iparadhiso yeItaly. Iri gadheni rinoyevedza rakatanga kugadzirwa sebindu diki rakatenderedza villa yevarimi. With time it expanded to the vast garden it is today. Giardino Sigurta garden is a sanctuary to 1,500 miti, uye miriyoni yemaruva 300 mhando dzakasiyana dzinotumbuka gore rega rega. Muzhizha 18 madhamu egadheni uye madziva anova nzvimbo tsvene kune vagari vemo uye vafambi vanobva kutenderera pasirese.
Sei Kusvika Parco Giardino Sigurta?
Giardino Sigurta gadheni iri 8 km kumaodzanyemba kweLake Garda uye 25 km kubva kuMantua. Unogona kufamba nechitima kubva kuVerona, uyezve tora bhazi kuenda kuValeggio Sul Mincio.
Rimini kuVerona Chitima Mitengo
Roma kuVerona Mitengo
Florence kuenda kuVerona Mitengo
Venice kuenda kuVerona Chitima Mitengo
10. Hallerbos Gardens kweBrussels, Bherujiyamu
Kamwe pagore, Hallerbos sango muHalle, inotumbuka kuva gadheni-senge gadheni. Kutenda kune akanaka bhuruu, kubva pakupera kwaApril kusvika pakati paMay nyika dzegirini dzinochinja kuita humambo hwebhuruu.
Uyezve, Hallerbos gadheni inogara mhembwe netsuro. Mune awa chete chitima kukwira kubva kuguta guru, iwe unogona kupinda munzira dzakanaka dzinodzungaira dzesango rebhuruu. saka, kana iwe ukaronga kushanyira Belgium mukati megore, rangarira kumira neimwe yeakanaka masango muEurope uye tora rwendo-rwekufamba uchifamba nenzira yero.
pano pa Save A Train, tichafara kukubatsira kuronga yako zororo kune iyo 10 Yakanakisa mapindu muEurope nechitima.
Iwe unoda here kupinza yedu blog positi "10 Yakanyanya Yakanaka Gardens MuEurope" kupinda yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/most-beautiful-gardens-europe/- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, you will find our most popular train routes – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura / of kuna / TR kana / nayo uye mimwe mitauro.
#chirimo beautifulgardens europegardens EuropeTraveling Frenchgarden chitubu travelbytrain